Madaxweynihii hore ee Faransiiska Nicolas Sarkozy oo xabsi lagu xukumay: – Voice of Somalis In Exile
1st of March, 2021-(AP)- Nicolas Sarkozy ayaa dacwad lagu qaaday lagu helay, in uu musuq ku kacay intii uu xilka haayey, waxaana maxkamad dalkaasi ku taala ku xukuntay xabsi.
Sarkozy oo dalka Faransiiska madaxweyne ka ahaa, intii u dhaxeysay sanadkii 2007-dii ilaa iyo 2012-kii ayaa lagu helay in uu xaakin u magacaabay, isagoo ku badalanaaya xog ku saabsan baaritaan lagu haayey, lacagtii uu ololaha doorashada ku galay.
Garyaqaanada ayaa ku baaqay, in ilaa iyo 4 sanno oo xarig ah loo jaro, hase yeeshee iminka waxaa lagu xukumay, saddex sanadood oo xarig ah, intiise ay dacwadiisu socotay, ayuu Nicolas Sarkozy, wuxuu dafiray in uu wax dambi ahba galay, wuxuuna sheegay, in eedeymaha ka dhanka ah oo dhami yihiin been la dhoo-dhoobay.
Dacwad oogayaasha ayaa maxkmadda u sheegay in xaakin Gilbert Azibert uu u magacaabay Monoca, in uu qaali ka noqdo, isagoo kaga badalanaayey, xog sir ahayd oo ku saabsanayd isaga, iyo qarashaadka uu doorashada ku galay, sidaasna uu shaqadaas ku dhiibay laaluush alaah.
Garyaqaanada ayaa intaa sku daray, in arrintan ay ku ogaadeen, kadib markeey, teleefoonada ku xireen qalab lagu dhageysto codadka, halkaasoo uu wada hadal dhex maray Nicolas Sarkozy iyo qareenkiisa Thierry Herzog.
Zarkozy ayaa talada dalka isaga dagay, arrin kale oo lagu qabsaday dartered, oo ahayd in Liibiya wax ka bixisay qarashkii uu doorashada ku galay, 2007-dii.
Sarkozy iyo qarayaaqaniida ayaa iminka heysta 10 maalmood oo xukunka racfaan kaga qaataan.
Nicolas Sarkozy ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyey oo faransiis ah oo abid xabsi lagu xukumo, hase yeeshee qof xil sare ka soo qabtay Faransiiska oo xabsi loo dhaadhiciyo, waxaa ugu dambeeyey, Marshall Philippe Pétain, waxeyna ahayd xilligii taliskii Naziga oo taliyahaas sare ee ciidamada, lagu helay in uu la shaqeeyey Naasigii.